Akhirso:- Ducaddii Iyo Dardaarankii Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somaliland+Sawirro | Hangool News
Akhirso:- Ducaddii Iyo Dardaarankii Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somaliland+Sawirro
October 17, 2017 - Written by Hangool
Hangoolnews:- Madaxweynaha Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu caawa kulan casho sharaf ah isugu yeedhay Komishanka qaranka, Murashaxiinta saddexda xisbi qaran, guddoomiyaha guurtida, Guddoomiyaha Maxkamada, taliyeyaasha ciiddammada, guddoomiyaha akaademiga nabada iyo horumarinta iyo xubno ka mida golaha wasiirada, waxaanu kulankaasi daaranaa hawlaha doorashada inagu soo foolka leh iyo sidii loogu hoggaansami lahaa shuruucda iyo qawaaniinta lagu hagayo doorashada dalka.
Waxaanu madaxweynuhu khudbadiisa ku yidhi”Bismillaahi Raxmaani Raxiim,
Musharixiinta Saddexda Xisbi Qaran, Xubnaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka, Shir-guddoonka Guurtida, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, Taliyayaasha Ciidammada kala duwan ee Qaranka, dhammaan waxaan idiin soo gudbinayaa salaan xambaarsan hilow, niyad-sami, nabad-gelyo iyo naxariis Eebe, “ASSALAMU CALAYKUM WA RAXMATULLAAHI WA BARAKAATU”.
Sida aynu la wada soconno, muddo bil ka yar ayaa inaga xigta, qabsoomidda Doorashada Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland. Sharaf wey bay ii tahay, in aynu xallinay duruufihii ku xeernaa geedi-socodka dimuqraadiyadda, iyo doorashooyinka dalkeena.
Ugu horreyn, waxa waajib inagu ah, in aynu Allaheena weyn u mahad-naqno.
Doorashada aynu dhawaan u dareerayno idam Eebbe, waxay mustaqbalkeena ku leedahay saamayn weyn. Anigu Madaxweyne ahaan, markaan eego Baraaruga Bulshada, iyo Bisaylka Musharixiinta Baratamaysa, wax war-war ah ma qabo. Hase-yeeshee, waxaan jecelahay in aan dhammaan, halkan idiinka soo jeediyo, hadallo duco iyo dardaaran ah, taas oo ah, ujeedada aan idiin marti-qaaday caawa.
Waa in aad dhawrtaan, Shuruucda iyo Xeerarka Nidaamka Doorashooyinka dalka. Sidoo kale, waxa waajib idinku ah, in aad u dhaga-nuglaataan, talooyinka, tilmaamaha iyo amarrada Guddida Doorashooyinka Qaranka, ee garsoorka idiin ah.
Duco-qabayaal, waxaan idin leeyahay “LAFAHA GURA, XARAGANA HAKA TAGINA”.
2)-Sidoo kale, waxa idinla gudboon, in aad taageerayaashiina ku wacyi-gelisaan, in ay ilaaliyaan anshaxa iyo nidaamka doorashada, isla markaana ay ka fogaadaan cunfiga, iyo wax kasta oo nabadgelyo darro abuuri kara.
3)-Waa in aynu dhinac uga soo wada jeesanno, cid kasta oo abuuraysa xasilooni darro iyo xiisad colaadeed. Waxa waajib ku ah muwaadiniinta Somaliland iyo musharixiinta hortayda fadhiya, in ay gacan siiyaan ciidammada qaranka ee ku hawlan, adkaynta nabadgelyada iyo sugidda amniga qaranka.
4)-Hore ayaa loo yidhi “GUULI LABA NIN KAMA WADA QOSLISO”. Sidaa darteed, Kursigan aan ku fadhiyo, ma qaado laba iyo saddex nin toona, ee dalkan waxa Madaxweyne ka noqonaya Nin qudha. Sidoo kale, waxa ku-xigeen ka noqonaya hal Nin.
Waxaan hoggaanka dalka ku wareejin doonnaa, labada musharax ee doorashada sifo sharci ah ugu guulaysta, insha Allah. Sidaa darteed, saaxiibada loolamaya, waxaan leeyahay, marka ay soo baxdo natiijada doorashadu, waa in aad aqbashaan oo ogolaataan natiijada doorashada. Qarankani, wuxuu ku soo meel-maray, hab-dhaqan ku dhisan tudhaale, talo-wadaag, tawfiiq iyo isu-tanaasul.
Ma aha, guuldarada siyaasaddu, in doorashada lagaaga adkaado, balse waxa guul darro iyo garaad xumo ah, in aad ku gacan-saydho go’aanka Guddida Doorashooyinka iyo Maxkamadda Sare.
WAXAAN UGA DIGAYAA GAR WEECSAN, IYO GUDDOON JILICSAN, OO AH GEERIDA GUDDI DHEX-DHEXAAD AH IYO HAY’ADAHA GARSOORKA. Waxaan idiinku ducaynayaa, in ilaahay idin garab galo, xilkana idinku asturo.
Ugu dambayn, dhammaan ciidammada qaranka, waxaan ku bogaadinayaa, habeen iyo maalin heeganka ay ugu jiraan, difaaca iyo adkaynta Nabadgelyada dalkooda hooyo.
Galad Eebaa Leh, Guulna Somaliland baa Leh